Inethiwekhi yokuNxibelelana yamaVeteran aseMelika! | Martech Zone
Inethiwekhi yokuNxibelelana yamaVeteran aseMelika!
NgoLwesine, Novemba 15, 2007 NgoLwesine, Novemba 15, 2007 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndathenga i-domain KwiNavyVets.com. Andinalo naliphi na ixesha lokuba ndisebenze ngokwakha indawo, ke ndibeka idomain phezulu Sedo.com ukubona ukuba akukho mdla kuyo kwaye ufumane intwana yeedola zentengiso. Incinci ayithethi nto… ngamawaka eengoma inyanga nenyanga, bendifumana ipenny apha naphaya.
Ngokunxibelelana nabantu ekunyukeni, ndiye ndaqala ukuvavanya iiphakeji ezahlukeneyo zonxibelelwano endinokuzifaka kule ndawo. Ndalayisha Elgg kodwa yayingeyona iphakheji elula yokwenza ngokwezifiso kwaye usebenze.
Malunga nelo xesha, ndaqala ukusebenzela uphawu lwendawo leyo. Ndithathe isimboli ye-USN kwaye, ndisebenzisa i-Illustrator, ndahlula zonke iileya kwaye ndongeza ubukhulu.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ndiye ndaqala ukujonga Ning. Ukuqala kwam ukubona u-Ning kwiminyaka embalwa edlulileyo kwakusekuqaleni Inkampu yeMashup. Yayinomdla kakhulu… isoftware eyayikuvumela ukuba ubhale ikhowudi yesiko ngaphezulu kweqonga labo… ayisiyiyo iplagi, kodwa yomelele ngakumbi.
Ning wakhe inethiwekhi yentlalo emnandi ekulula ukuyivula ngaphandle kwebhokisi! Ngapha koko, kundithathile ixesha elide ukwakha i-logo kunokuba kuthathe ukufumana inethiwekhi yokuncokola isebenza!
Ndikhethe ezinye zeenkulumbuso ze-ala ezinokukhethwa - indawo yabucala, eyam intengiso, kunye nokususwa kwayo yonke iNing Bling. Ndicinga ukuba ijongeka ilungile! Ngoku ndifuna ukufumana ezinye iiVets ezinomdla! Ndicinga ukuba libali elihle - a Inethiwekhi yezokulwa yamajoni aselwandle… Yeyakhe kwaye iqhutywa liGqala loMkhosi waselwandle!
Ividiyo: IColts.com iyenza intengiso yeVidiyo yabaxhasi ngendlela eyiyo!
Novemba 15, 2007 ngo-1: 10 PM
UDoug, ulwazi olulungileyo, ndiyazi abantu abambalwa abenza inethiwekhi encinci kwaye baya kwabelana nabo ngeposi!
Novemba 15, 2007 ngo-8: 18 PM
Ndamangaliswa ngokwenene yindlela ekulula ngayo ukuyisebenzisa, i-JD! Ndicinga ukuba ubeko lungasebenzisa uncedo olongezelelekileyo, kodwa luza kufika apho!
Indawo ifumene ubhaliso lokuqala ngokuhlwanje! Woohoo!
Novemba 15, 2007 ngo-2: 03 PM
Ndiyavuya ukubona ukuba uqalile into enesizinda (indawo enkulu enjalo!). Kudala ndisebenzisa u-Ning nge-IndyLance ixesha elincinci kwaye bekulungile ukuza kuthi ga ngoku. Andikhange ndibhidanise kakhulu nangazo naziphi na izinto ezihambele phambili, kodwa ukukwazi ukujonga ezinye zeekhowudi zakho kubanjwe, inkonzo yasimahla inqabile.
Khange ndibenalo ixesha lokujonga i-Ning API okanye izinto ezinokwenzeka ngeGoogle's Open Social. Ewe, uluhlu lwam olungapheliyo lokwenza.
Novemba 15, 2007 ngo-8: 14 PM
Ngokuqinisekileyo masabelana ngamanqaku xa sinethuba, uNowa. Ndikunye nawe-uluhlu lwam lude kakhulu kunokwazi kwam ukugqiba imisebenzi!
Novemba 15, 2007 ngo-7: 46 PM
Ndoda elungileyo, ukhe ulale ?!
Enye iprojekthi entle, exabisekileyo evela eDoug-meister. Ngethamsanqa ngayo!
Novemba 15, 2007 ngo-8: 13 PM
Ngokwenyani bendiphazanyiswa yimini emininzi-ndinomqala obuhlungu. Luphawu lokuqala lokuba ndisebenza iiyure ezininzi. Ndizolala kamnandi ebusuku ndibuyele kuyo ekuseni!
Novemba 16, 2007 ngo-8: 08 PM
Oku kupholile ngenene. Ndineembono ezingaphezu kwesibini ngeewebhusayithi zonxibelelwano, kwaye ndivile ngo-Ning kodwa andikayivavanyi. Kusenokufuneka ndenze njalo. Ndiyathemba ukuba le nto iqala ukuphuma kuwe.
Novemba 16, 2007 ngo-11: 26 PM
Wowu! Indawo ebukhali kakhulu! Ndakhe ndeva ngo-Ning kodwa andazi ukuba inamandla kangakanani. Ngokuqinisekileyo ndiza kujonga kule nto. Enkosi!
Nov 19, 2007 kwi-4: 21 AM
Uxolo xa usiva ukuba unengxaki no-Elgg, ndinganomdla wokwazi apho ufumene kunzima ukuseta. Izinto ziguquka ngokukhawuleza ngu-Elgg, umzekelo, ukukhutshwa okulandelayo, okulindeleke ngoDisemba, kuya kubandakanya ukufakelwa okuphuculweyo. Ngapha koko, uluntu lomphuhlisi we-Elgg luyonwaba ngabantu abaninzi abazimisele ukunceda. Ke, ukuba uyasifumana isidingo sokunikezela ngamalungu akho inqanaba eliphezulu lolawulo lwabucala, okanye ukuqala ukuziva ungakhululekanga malunga nenkampani enye elawula yonke idatha yakho, siyakwamkela ukuba ume kwakhona ku-Eggg.org 😉
Ngethamsanqa ngale projekthi!